မေတ္တာ ၏ ရောင်ပြန် ~ Myo Chit Myanmar
မေတ္တာ ၏ ရောင်ပြန်
" သန့်ရှင်းသော မေတ္တာ "
ဒီနေ့ Boss က ကျွန်တော် ပျော်အောင် ဆိုပြီး Deal တစ်ခု ပေးပါတယ်။
သူ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရဲ့ သားလေး ကားဝယ်တာ ကျွန်တော့်ကို ပေးရောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကားလောက မှာတော့ Manager's Spoon လို့ခေါ်တာပေါ့လေ။
၃ နာရီကျော်ကားမောင်းပြီး San Diego အနားထိ ကားကို သွားယူပေးရပါတယ်။
အစကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့သားဆိုတော့ ပိုက်ဆံ သိပ်ရမှာလဲ မဟုတ်ဘူး လို့ထင်ပေမယ့် Boss ရဲ့ စေတနာကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ သွားယူပေးဖို့ သဘောတူလိုက်တာပါ။
ပြန်ရောက်ပြီး ကားကို Deliver လုပ်ပြီးတော့ မှ Comission က 480$ ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ အများကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ပင်ပန်းရတာ ကိုတောင် မေ့သွားတဲ့အထိ Boss ကို ကျေးဇူးတင်သွားပါတယ်။
သူ က ကျွန်တော် အရင်က ပိုက်ဆံအများကြီး ရ တဲ့ဆိုင်ကြီးတွေ မှာ လုပ်လာဖူးတာ ကို သိတော့ ကျွန်တော် ဒီ Local ဆိုင်လေးကအလုပ်မှာ ပျော်စေချင်လို့ တတိယ နေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို မုန့်ဖိုးပေးတဲ့သဘော စီစဉ်ပေးတာပါ။
အရင်က Comission 2500$ 4000$ ရခဲ့ဖူးတဲ့ အခါတွေ Bonus 3000$ Hit ဖြစ်တဲ့အခါတွေ တုန်းကတောင် ဒီလောက် မပျော်ဖူးပါဘူး။
ပိုက်ဆံ ပမာဏ နည်းနည်းလေးပေမယ့် သဘောကောင်းတဲ့ Boss ရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ စေတနာ ကို ကျေးဇူးတင်လို့ မျက်ရည်တောင် ဝဲသွားပါတယ်။
I ♥ U J.
(Oct, 16th, 2011)
" မေတ္တာ ၏ ရောင်ပြန်ဟတ်ခြင်း "
မနေ့ က ကျွန်တော့် ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဘော့စ် ကို ကျွန်တော် အိမ် မပြန်ခင်နှုတ်ဆက်ရင်း ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာရယ် သူ ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ကျွန်တော် အမြန်ဆုံး သူ့အတွက် ပြန်ရှာပေးမယ်လို့ ရီရင်းမောရင်း ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော် မနက် အလုပ်မသွားခင် ဘုရားရှိခိုး ဖို့ နောက်ကျနေတာနဲ့ စိတ်ထဲကတော့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ ကောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေကို ပြန်ကောင်းကျိုးပြုခွင့်ရပါစေလို့ အရင်လိုဘဲ နေ့စဉ်အတိုင်း ဆုတောင်းမိခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ရောက်သွားပြီး သိပ်မကြာခင် ဘဲ အလုပ် ပထမ ဆုံးဆင်းတဲ့ Oct 14th, 2011 ( သောကြာနေ့ ) က ရောက်လာခဲ့တဲ့ Client ကောင်လေးတစ်ယောက် မမျှော်လင့်ထားဘဲ ပြန်ရောက်လာတာ နဲ့ သူ ကြည့်ထားတဲ့ကားလေး ကို ရောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီဆိုင် မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စတုထ္ထ နေ့မှာ ရောင်းရတဲ့ ဒုတိယ ကား ဝယ်သူ ပြန်သွားပြီးတော့ ကျွန်တော် ရမယ့် ပိုက် ဆံ နဲ့ ဘော့စ် ရမယ့် ပိုက်ဆံ ကို စက်ထဲမှာ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်က ၅၆၀ ဘော့စ်က ၂၀၀ လောက် ရှိပါတယ် ။
(မန်နေဂျာ တွေက တစ်ဆိုင်လုံးက အမြတ်ကို ရတာ မို့ တစ်စီးချင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းဆီ ရတာထက် နည်းပါတယ်)
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကို ကားရောင်းအပြီး သူ ကျွန်တော့် ကို အလကား ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Deal က နေရ ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ ၄၈၀ မပြည့်သေးတာ ပြည့်အောင် ပြန်ရှာပေးပါ့မယ်လို့ သွားပြီး နောက် ဖို့ ကြံနေတုန်းမှာဘဲ ဘော့စ်က ကျွန်တော့် ကို ဖုန်းနဲ့ သူ့ ဆီခဏ လာဖို့ လှမ်းခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုတွေ့တော့ အားနာနေတဲ့ မျက်နှာ နဲ့ မနေ့က သူ့ အသိရဲ့သားလေး ကားဝယ်သွားတာ ဘဏ်ရဲ့ လိုအပ်မှု တစ်ခုကြောင့် တစ်ချို့ အမြတ်တွေ ဖြတ်လိုက်ရတာ ကျွန်တော် ရမယ့် ကော်မရှင်က ၂၀၀ လောက် ဘဲ ကျန်တော့မယ် ဆိုတာ သူ မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေဆိုတာ ခေါ်ပြီးတောင်းပန်တာပါ။
စေတနာ နဲ့ ကံတရား ရဲ့ ထူးဆန်းမှု ဟာ ရှင်းပြလို့မရအောင် ကို ဆန်းကြယ်ပါတယ်
ကျွန်တော် သူ့ကို စေတနာ သန့်သန့် နဲ့ ပြန်ရှာပေးလို့ ရတဲ့ ပမာဏ ဟာ သူ တကယ် ကျွန်တော့် ကို ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပမာဏ နဲ့ ငွေ ၂၀၀ ခြင်း ကွက်တိ ထပ်တူ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကို ကျွန်တော် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံအားသင့်နေတုန်းမှာဘဲ ပိုထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ကျွန်တော် နဲ့ သူ နဲ့ စကားပြောနေရင်းဘဲ ဆိုင် ပိုင်ရှင် က အခန်းထဲ ပြုံးပြီးရောက်လာပါတယ်။
ကျွန်တော် အခုလေးတင် ရောင်းလိုက်တဲ့ ကား က Manufacturer က နေ ရောင်းတဲ့ REP နဲ့ Manager တွေ အတွက် တိုက်ရိုက် သပ်သပ် အပို အဖြစ် SPIN (or) Spiff လို့ခေါ်တဲ့ 500$ Bonus Cash ပါ ရ လိုက်ပါတယ် တဲ့။
Boss နဲ့ ကျွန်တော် 250$ ဆီ ပေါ့။
ဒီတော့ သူလဲ ကျွန်တော့် ကို မနေ့ က ကား မှာ အပြည့် မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ၂၅၀ ပြန်ဖြည့် ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် လဲ အဲ့ဒိ ပိုက်ဆံကို ဒီနေ့ ကား နဲ့ သူ့ကို ပြန်ရှာပေးလိုက်သလို ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တာ နဲ့ ဘုရားရှင် ကို ကျေးဇူးတင် စွာ နဲ့ ရည်မှန်း ကန်တော့ရင်း မျက်ရည် ကျမိပါတယ်။
ကျွန်တော် ကားစရောင်းကာစ 2003 ခုနှစ်လောက် က လတစ်လရဲ့ လကုန် နောက်ဆုံးရက်မှာ ကားတစ်စီးထဲ ကြောင့် နဲ့ Top Units + Top Gross Profit + Top Sales + Weekend + Monthly Bonus တွေ အားလုံး ပေါင်းပြီး ငွေ 5000$ လောက်ရဖူးပါတယ်။
လုပ်သက်ကြာလာပြီး တော့ နောက် တစ်ခါမှာလဲ ကား အစီး ၂၀ ကျော်လောက် ရောင်းရတုန်းက Commission + Bonus အားလုံး 18000.00$ လောက် လဲ တစ်လ ထဲ ရဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိအခါတွေ တုန်းက ကိုယ့် ကျွမ်းကျင်မှု ကို ဂုဏ်ယူတာ နဲ့ နည်းနည်း ဆောင့်ကြွားကြွားဖြစ်ချင်တာ က လွဲပြီး သိပ်ကြီးတော့ ဝမ်းမသာခဲ့ပါဘူး။
ခုတစ်ခါကတော့ ကိုယ့်ကို အကျိုးမကြည့်ဘဲ အလကား ကူညီခဲ့သူကို ကိုယ်လဲ ကိုယ်ကျိုး ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပြန်ကျေးဇူးဆပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ စစ်စစ် က ထူးဆန်းစွာ ချက်ချင်း ပြည့်သွားတဲ့အတွက် ဖေါ်မပြတတ်အောင် ကြည်နူးရပါတယ်။
အဲ့ဒိခံစားမှုကို ဒေါ်လာ တစ်သိန်းနဲ့ ဝယ်လို့လဲ ရမယ် မထင်ပါဘူး။
ကျွန်တော့် ဘဝ မှာ အဲ့လို ထူးထူးဆန်းဆန်း ကံကောင်းတာတွေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ငယ်စဉ်ကထဲက မကြာခဏ တွေ့ကြုံဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော် မေတ္တာတရား နဲ့ စေတနာ ရဲ့ တန်ခိုးကို ငယ်စဉ်ထဲက ယုံကြည်ခဲ့သလို မယုံကြည်လို့ မရလောက်အောင် ထူးဆန်းတဲ့ ယ္ခုလို တိုက်ဆိုင်မှု များစွာ ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတာနဲ့ အမျှ ယုံကြည်မှု က ပိုမိုကြီးမားခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဟာ အပြစ်ကင်းတဲ့ သူတော်စင် သူတော်ကောင်းလဲ မဟုတ်သလို
မဟာ ကရုဏာ စေတနာရှင်ကြီးလဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မွေးစကထဲက ကျွန်တော် ဟာ ပါတ်ဝန်းကျင် မှာ သိတဲ့ မြင်တဲ့ အကူအညီ လိုအပ်နေတယ် လို့ သေချာသိသာတဲ့ လူတိုင်း ကို သူတို့ က လုံးဝ မတောင်းဆိုပေမယ့် ကျွန်တော် အမြဲ ပင်ပန်း ဆင်းရဲ ဒုက္ခ အရောက်ခံ အစော်ကားခံ လူအမုန်းခံ အထင်လွဲခံပြီး ကျွန်တော် အမြဲ ကူညီ ကာကွယ် ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
New Year ပါတီသွားဖို့ အဝတ်အစား အကောင်းစားတွေ ဝတ်ထား ပေမယ့် လမ်းမှာ ကားပျက်နေတဲ့ အကူအညီလိုနေတဲ့ သူ ကို အင်္ကျီတွေ ညစ်ပါတ်ပြီး ချွေးတွေ ရွှဲနစ် သွားအောင် ဆင်းတွန်းပေးတာမျိုး တွေ မကြာခဏ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါ ကျွန်တော် ကိုယ်ရည်သွေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အလွယ်တကူ နားလည် နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြောပြတာပါ။
ဒီလို လုပ်ပေးရတိုင်းလဲ ကာယကံရှင်ကို ဘာမှ ပြန်တောင်းဆိုမှု မလုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် တစ်ခုထဲ အမြဲ ဆုတောင်းခဲ့ ပါတယ်။
အဲ့ဒိ ဆု က
" ကျွန်တော် ဒုက္ခရောက်နေရင် အကူအညီ အရမ်း လိုအပ်နေရင်လဲ ခု ကျွန်တော့်လိုဘဲ ကူညီမယ့် သူ ဖြေရှင်းပေးမယ့် သူ တစ်ယောက် အလိုလို ရောက်လာပါစေ " ဆိုတဲ့ ဆုပါဘဲ။
အဲ့ဒိ ဆု ဟာ မွေးကထဲက ယနေ့ထိ အမြဲလဲ ပြည့်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ထိ ကျွန်တော်ဟာ ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်တယ် ဆိုတာ တစ်ခါ မှ မကြုံဖူးတဲ့အပြင် ကျွန်တော့် ဘဝမှာ တစ်ကယ် လိုချင်လာပြီ ဆိုတဲ့ အရာတိုင်း ကို မရခဲ့တာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးသလို ဒုက္ခ ဆင်းရဲမှု အသက်ဘေး စတဲ့ အရာ များစွာကနေလဲ အမြဲ ထူးဆန်းစွာ ဘေးမသီရန်မခ လွတ်မြောက် သွေဖယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် အတွင်းကလဲ ကျွန်တော့် ကားလေး က မျက်နှာချင်းဆိုင် က လာနေတဲ့ Truck ကြီး နဲ့ ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုက်မိတာတောင် ကျွန်တော့် ကိုယ် မှာ ခြစ်ရာတစ်ခု မထင်ခဲ့သလို မျိုးပေါ့။
အဲ့ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့် ရဲ့ သီလစင်ကြယ်မှု တို့ သမာဓိ ကောင်းလို့ တို့ လို့ လုံးဝ မထင်ပါဘူး။
ကျွန်တော် စစ်မှန်တဲ့ စေတနာ နဲ့ ရင်းနှီး မတည် ခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ် တွေ ကြောင့် ဘုရားရှင် သို့ မဟုတ် မေတ္တာ ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ကံတရား က နေ ကျွန်တော့်ကို အမြဲ ပြန်စောင့်ရှောက် ပေးနေတာ လို့ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦး အနေနဲ့ မုချ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ကိုလဲ စေတနာ နဲ့ တိုက်တွန်းချင်တာတစ်ခုက ...
ဘယ်တော့ မဆို စေတနာ သန့်သန့် နဲ့ မေတ္တာတရား တစ်ခုထဲကြောင့် ပြုမူ ဆောင်ရွက် ခဲ့ တာမှန်ရင် မေတ္တာတရားရဲ့ တန်ခိုးတော်ဟာ တူညီတဲ့အကျိုး ကို ထာဝရ ထပ်တူ ရောင်ပြန်ဟပ် လေ့ ရှိတယ် ဆိုတာ ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ဖို့ပါဘဲ။ ။
(Oct 17th, 2011)
Posted in: Article,Experience Article,Literature,Religious Article,Social Community Article
This is great post. I totally agreed with you. Great Job.
Hey Nyi Nyi,
I wish to see you guys in L.A soon.
Tell Thet Su I said hi and I miss you both
Nice to read your post. thank you. I agree too, haveanice day.